Home Wararka Mustaf Dh. “Dalka doorasho aadayaa, Dowladana waxaa musharax u ah Xasan Kheyre”
Mustaf Dh. “Dalka doorasho aadayaa, Dowladana waxaa musharax u ah Xasan Kheyre”
Xildhibaan Mustaf Dhuxuloow oo ka mida Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya, kana tirsan gudiga baarlamaanka ee loo xilsaaray talo bixinta doorashada 2021 ayaa sheegay in talada Gudiga ay tahay in doorashada dalka noqoto mid ku saleeysan 4.5 oo oo ay ku noqoto qaabkii horay loogu soo dooran jiray madaxweynaha. Xildhibaanka ayaa tilamaamay in xiligaan ayan jirin waqti lagu diyaariyo doorasho cod iyo qof.
Mustaf Dhaxuloow oo ay isku beel ka soo jeedaan Ra’iisal Wsaare Kheyre aya dareenkiisa waxa uu ka tarjumaa fakarka uu qabo Xasan Kheyre oo isagu rumaysayn in doorashada soo socotaa uu xildhibanada lacag ku iibsan karo.
Dhanka kale Xildhibaanka oo ka hadlaayay kulan gaar ah oo ay isugu yimaadeen jufada Habar-ceyno ee uu ka dhashay Xasan Kheyre ayaa ka sheegay in Dowlada Soomaaliya ee uu hogaamiyo MW Farmaajo yeelan doonto hal Musharax kaas oo aahaan doono Xasan Cali Kheyre. Mustaf ayaa yiri “ Marka la soo gabo–gabeeyo doorashada Galmudug, Xasan waxa uu ku dhawaaqayaa in uu yahay Musharax doorashada 2021, waxaana aan kuligeen wadagali doonaa ololaha doorashada iyda oo aan loo kala harin”.
Oday ka mida odoyaasha ku sugnaa kulanka ayaa waydiiyay Mustaf in Madaxweyne Farmaajo raali ka yahay in Xasan Kheyre isa soo sharxo, Mustaf ayaa ku jawaabay “ Adeer Farmaajo waa ku daayay, isaga hada talo uma taalo.. isaga ayaan kuqasbi doonaa in uu tanaasulo, hadii uu diidana waxaa kuu sheegyaa in ay socoto qorshe lagu qasbi doono in uu isaga iscasilo oo kursiga firaaqeeyo, arintaan warkale loogu noqon maayo”.
Hadalka uu ku hadlayo Xildhibaan Mustaf Dhuxuloow ayaa ah mid ka tarjumaya dareenka Xasan Kheyre iyo beeshiisa. Beesha uu ka dhashay Xasan Kheyer ayaa rumeysan in MW Farmaajo u tanaasuli doono Xasan Kheyre iyadaa oo culayska kaga imaan doono xaaska Farmaajo Seynab Macalim oo iyada oo dhankeeda aaminsan in Farmaajo uusan rajo fiican ka qabin in dib loo soo doorto.
Kulankii shalay ee baarlamaanka ayaa laga garan karay sida Kooxda/ Xildhibaanada taageersan Xasan Kheyre ay uga horyimaadeen barnaamijka madaxweyne Farmaajo. MW Farmaajo oo eedo badan galiyay beesha Mareexaan ayaa u muuqda mid la soo isticmaalay xiligii loo baahnaa hadana meel cidla ah looga dhaqaaqay.